ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကို ကိုဗစ်-၁၉ မကူးစက်အောင် ထိုင်းအစိုးရကဘယ်လိုကာကွယ်ထားသလဲ ? – Myanmar Live
May 11, 2020 May 11, 2020 - by iampmy
ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ထိုင်းကြက်ခြေအနီအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန နှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနတို့ပူး ပေါင်းကာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များကို အချက် ၁၁ ချက်ချမှတ်ကာ မြှင့်တင်ထားပါတယ်။
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အတွက်နည်းလမ်းများကိုအောက်ပါအတိုင်းချမှတ်ကာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။
၁. ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတင်သွင်းမှုများကို မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှစပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်နှုန်းဟန့်တားနိုင် မည့်အချိန်အတိုင်းအတာထိရပ်ဆိုင်းထားခြင်း။
၂. ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ နယ်ခြားသွားလာနှုန်းကိုဟန့်တားရန်အတွက် NameList တင်ထားပြီးသူများကို ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဗီဇာကင်းလွင်ခွင့်ဖြင့်နေထိုင်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားခြင်း။
၃. ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကြား ရောဂါပြန့်နှံ့ခြင်းကိုကာကွယ်ရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတင်းအချက်အလက် များကိုသာ ဖတ်ရှု့ကြရန် လှုံ့ဆော်ဆောင်ရွက်ပေးထားခြင်း။
၄. ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကြား အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကို အန္တရာယ်ကင်းစွာအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် ရောဂါထိန်းချုပ်စင်တာများမှ ချမှတ်ထားသည့် စီမံချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပေးခြင်း။
၅. အလုပ်သမားများ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးကူးစက်မှုမရှိစေရန် အလုပ်ရှင်များဖြင့်အမြဲညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း။
၆. ရေလုပ်သားများ လှေမထွက်မီ-မဝင်မီ (PIPO) ဌာနမှ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပေးခြင်း။
၇. ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအများစုနေသည့်နေရာများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီး
၈. ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါခံစားနေရသောရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား
၁ဝ. ကျန်းမာရေးအာမခံ လစဉ်ကြေးများကိုလျော့ချပေးထားခြင်း။
၁၁. ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအများစုနေထိုင်သည့် နေရာများကို လုပ်ငန်းရှင်များဖြင့်ပူးပေါင်းကာ စာရင်းကောက်ယူပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဆက်လက်မကူးစက်စေရန် ကိုဗစ်ထိန်းရချုပ်ရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စီမံချက်များနှင့် ကိုက်ညီစွာဆောက်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးနေခြင်း။
ထိုင်းအစိုးရကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ထိုင်းရောင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကြား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်နှုန်း ကိုထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်တာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်နေသည့်အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို မိမိ လုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းခွင် တွင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ အပြင်သွားတဲ့အချိန်တိုင်း နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ဖို့ကိုလည်း တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် : Thansettakij Multimedia, Posttoday Online
TaggedLabor newslabourlabour newsMyanmarmyanmar liveMyanmar live newsMyanmar newsmyanmarlabourMyanmarliveMyanmarlivenewsအလုပ်သမားရေးရာသတင်း
Previous Article ၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ မေလ ၁၁-၁၇ ရက်ထိ
Next Article ၅ လအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံတွင် သွေးလွန်တုတ်ကွေးလူနာ ၁ သောင်းကျော်တိုး